Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || चियासँग गिरि श्रीस मगर – kayakairan.com
चियासँग गिरि श्रीस मगर
लेखराम सापकोटा / भरतपुर
मंसिर ९ गते शनिबार
चितवनका स्रस्टाले शनिबार अलि फरक स्वादका कविता सुन्न पाए । चियासँग कविताको ३८ औं शृङ्खलामा उपस्थित भएर कवि गिरि श्रीस मगरले कविता सुनाउँदा स्रोताहरु चाख मानेर सुनिरहे । रुपन्देही निवासी कवि मगर एकल वाचनमा चितवनमा पहिलोपटक सुनिएका हुन् । प्रोक्सी एड शिर्षकको कविता सुनाएर प्रस्तुत भएका उनि क्रमैसँग क्रसिकृत आवाज, नक्सा, आँखीझ्यालमा इतिहास, बाँकी काम र आइमाई प्रश्न गरि पहिलो चरणमा छ कविता सुनाए ।
देशलाई हरेक खराव चिजहरुबाट मुक्त गरिनु पर्छ । मगरका कविता सुनिसकेपछी समालोचक उदय अधिकारीले भने – गिरि श्रीस देशको बारेमा चिन्तन र चिन्ता गर्ने स्रस्टा हुन् । अर्का समिक्षक रामचन्द्र श्रेष्ठले गिरि श्रीसका सबै कविता शक्तिशाली भएको बताउँदै उनि दार्शनिक कवि भएको दाबी गरे ।
दोस्रो चरणमा पनि उनि थप कविता सहित प्रस्तुत भए । होडिङ्ग बोर्डहरु, ट्रान्सर्फमर तान्ने केटाहरु, हात नभएको मानिस, वीर अस्पताल बनेपछि, ब्ल्याक होल र युवाको गीत गरि दोस्रो चरणमा पनि छ कविता सुनाए । कविता वाचनको सिलसिला सकिए लगत्तै कवि गोविन्दराज बिनोदीले कवि मगरका कवितामा सामाजिक स्वाद बढी आएको बताए । उनका कविताले नेपाली समाजको बास्तबिकता बोलेका छन्, उनले भने । कार्यक्रममा ईश्वर कँडेल, भूपिन, धर्मराज अर्याल, द्वारिका नेपाल, रमेश प्रभात, प्रा.डा. एकनारायण पौडेल, डा. केशव चालिसे, लेखराम सापकोटा, रमेश पाण्डे, सरला जोशी, लक्ष्मी बराल लगायतको उपस्थिति रहेकोे थियो ।